KULANKA XUBNAHA TOGDHEER DEVOLOPMENT COMMITTEE UK “TDC” | Salaan Media
KULANKA XUBNAHA TOGDHEER DEVOLOPMENT COMMITTEE UK “TDC”
Kulan ka dhacay Galbeedka London oo ay isugu yimadeen Gudida iyo Xubno ka mid ah TOGDHEER DEVELOPMENT COMMITTEE (Gudida Dib u dhiska Gobolka Togdheer) ayaa ahaa der-der galinta hawlaha u yaala..Warxibinta oo dhan halkan hoose ka akhri.
Kulankan oo dabasocda kulamo hore oo la qabtay sida:
– Afar kulan oo ka dhacay bariga London.
– Laba kulan oo lagu qabtay goobtan aynu fadhino.
– Kulan lagu qabtay North West London.
– kulan lagu qabtay Savanah restaurant shepherds bush.
Kulamadaas oo dhamaan lagaga wada tashanaayay sidii loo dardar galin lahaa waxqabadka ama horumarrinta gobalka Togdheer.
Kulamadan oo ujeedada laga lahaa aynu odhan karno waxa bundhig u ahaa ka qeybqaadashada dib u dhiska madaarka Burco. Markii la rogrogay lana balaadhiyay talada, waxaa la isla gartay in howsha inoo taal ka balaadhantahay madaarka loona baahanyahay in kulamada la kordhiyo, lana unkamo madal loo astaameeyo dhanka horumarka guud, kuna saleysan sidii wadajir loogu soo jeedsan lahaa gobalka. Hawsha ama horumarka ka socda gobalka ama u baahan in la hirgaliyo aynu si wada jir ah uga wada qeyb qaadan laheen.
Kulamadaas aynu kor ku soo xusnay waxa ka soo baxay arimahan hoos ku xusan;
In si buuxda looga qeybqaato dib u dhiska madaarka Burco. “Burco International Airport”
Hirgalinta “Unity” ama dib u soo celintii wadajirka gobalka iyo wax wada qabadka.
Sidii aqoonta ama aqoonyahaniinta reer togtheer ee ka suulay gobalka dib loogu soo dabaalilahaa loona abuuri lahaa bar kulan ka dhexeeya dhamaan inta jecel ama ku hawlan horumarka gobalka iyo wadajirka bulshada.
Sidii wax loola qeybsan lahaa gobalada kale ee Somaliland iyo sidii hormood looga noqon lahaa dhamaan dhinacyada waxqabad, horumar IWM ee ka socda Somaliland iyo qurbahaba.
Inaga oo arimahaas ka duulayna waxa uu yahay Agandaheena maantu:
1. Arinta dib u dhiska madaarka Burco. 17:30
2. Hirgalinta iyo kobcinta TDC “TDP” time 19:40
DUCO IYO SOO AFJARIDA SHIRKA “Allaa mahad leh” 21:30PM
Wixii faahfaahin ah kala soo xidhiidh
Xamse Ahmed Salaan 077377522004,
Saeed Hassan shekeye 07534097285,
Ali OSman Ali-bashir 07572334926
Saciid guray 07951159494